Tetika filalaovana blackjack ho an'ny mpilalao avy any Madagasikara | BlackJack77
Tena	/ Blackjack Tetika
Tetika filalaovana Blackjack
Blackjack dia lalao tsotra hanombohana milalao saingy sarotra ho an'ny tompony. Raha mikasa ny handresy ny lalao dia ho lasa mpilalao mahay indrindra ianao, ity torolàlana ity dia toerana tsara hanombohana. Ny paikady ho an'ny blackjack izay hitanao ato amin'ity fitarihana ity dia hanampy anao hahatakatra ny zava-tsarobidin'ny lalao rehetra ary ny taratasy trompetra findainao hitanao eto dia ho lasa namanao akaiky indrindra eo amin'ny latabatra.
Na dia misy paikady maro samihafa ho an'ny blackjack aza izy ireo, dia miankina amin'ny fotokevitra maintim-piraketana rehetra izay natao tamin'ny alàlan'ny famakafakana matematika sy ny fepetra mety hitranga rehetra. Ny filalaovana ny paikady maodely miloko dia tsy midika velively amin'ny fizotran'ny tetikady fototra izay ny teboka voalohany amin'ny drafitra lalao rehetra.
Raha tsy misy ado fanampiny, dia ity tabilao tsotra fikirakirana blackjack ity izay hanampy anao hahatonga ny lalao ho tanteraka toy ny azo atao:
Ny tabilao matevina mijery ianao dia ny ankamaroan'ny zavatra rehetra. Ity tabilao ity dia milaza aminao izay tokony hataonao amin'ny toe-javatra rehetra azonao atao mandritra ny lalao. Ny tsanganana havia dia sarobidy amin'ny tananao, fa ny laharana ambony dia maneho ny karatry ny mpivarotra. Raha vao mifampiresaka ireo roa ireo ianao, ny tabilao dia manome anao ny lalao marina hanaovana azy. Ny tabilao etsy ambony dia natao ho an'ny karazan-javatra samihafa ary na firy na firy ny sombin-tsarimihetsika amin'ny lalao môtô milalao milalao, ny tabilao dia ampiharina. Ny hany fotoana ity toro-làlana tsotra torolalana ity dia tsy azo ampiharina raha toa ka manisa karatra ianao, izay mety hampiharina ireo fitsipika fanampiny.
Ny tabilao mipetaka mipetaka naseho etsy ambony dia mila ilainao ny milalao ny paikady nandresy tsara indrindra izay tsy ahitana karatra maro. Raha mikasika ny dikan-teny an-tserasera, ity no tetik'ady faran'izay haingana indrindra ary mifototra tanteraka amin'ny matematika sy ny fahasamihafana amin'ny lalao.
Na dia mino aza ny ankamaroan'ny mpilalao vao haingana fa tsy misy filalaovana filalaovana na inona na inona ny toe-javatra, dia fantatry ny mpikaroka tsara kokoa. Ny tabilao fandroahana blackjack dia manondro fa tetikady iray ihany no marina ary ny tabilao nomenareo anao dia milaza aminao hoe rahoviana ianao handratra sy tsy hikorontana amin'ny blackjack, rehefa mihemotra ny fotoana sy ny fotoana hanaparitahana ny karatrao. Atomboy ny tabilao ankehitriny, na manàna izany fotsiny raha mbola milalao ary ny lalao dia hahita fiovam-po mahavariana, azo antoka!
Strategies for Blackjack amin'ny karazana varotra samihafa
Tahaka ny anaram-boninahitra casinia, ny lalao fototra 21 dia niorina nandritra ny taona maro ary maro ireo dikan-teny novolavola. Tamin'ny voalohany, nilalao toy ny deck ny lalao, fa rehefa noforonina ny paikady manasongadina karatra ho an'ny blackjack, dia nampiditra sehatra 2-deck, 4-deck, ary dikan-marenan'ny lalao.
Ny paikadin'ny paingam-pandrenesana tokana voalohany ampiharina amin'ny lalao aloha dia mihatra amin'ny ampahany betsaka amin'ny dikan-teny miaraka amin'ny kiraro lalindalina kokoa. Ohatra, paikady 2 sy tetikasa 8 deck dia mitovy amin'ny tsy fisiana ny sarin'ireo mpilalao sarimihetsika tsy misy fomba hanatsarana ny paikadiny. Noho izany dia ny paikady iray sy ny fanaovana hosoka iray ihany no azo ampiharina amin'ny dikan-teny rehetra.
Nandritra ny taona maro dia nisy dikan-teny sasantsasany tamin'ny paikady tarigetra 4 deck ary ny paikady ho an'ny version 6 ny lalao dia novolavolaina, ary nanampy kely ny fanodikodinam-peo tamin'ny takelaka hosodoko mainty. Na izany aza, ny milalao tetik'ady iray ihany, na dia eo aza ny isa maromaro, dia mety tsy hanisy ratsy anao loatra toy ny kisendrasendra efa-drakitra tapakila roa ary ny an'ny lalao 8 dia mitovy tanteraka.
Famaranana ny planeta amin'ny Blackjack Switch
Na dia nilaza aza izahay fa ny tabilao fototra dia azo ampiharina amin'ny lalao mainty hoditra, na inona na inona ny halalin'ny kiraro ao amin'ny play, ny dikan-teny samihafa ao amin'ny lalao dia mila miovaova amin'ny lalao tsara indrindra. Ny ohatra mazava indrindra dia ny fantsom-peo moka, izay ahafahan'ny mpilalao mandeha tanana roa avy eo ary manidy karatra eo anelanelan'ny tanana roa.
Ao amin'ny famolavolana fiovana, ny mpilalao dia avela hampiasa karatra amin'ny tànana iray amin'ny tanana hafa. Izany dia nokaramaina ho an'ny 21 vola amin'ny vola sy ny sarin'ny mpivarotra 22 miaraka amin'ny tanana rehetra tsy manana busts ary tsy manary afa-tsy amin'ny 21 taona. Misaotra ny fahasamihafana eo amin'ny fifandimbiasan-tsakafo mainty, misy planina samihafa tsy maintsy ampiharina amin'ity lalao ity, ary afaka jereo ity tabilao ity eto.
Ny fomba hanoratana ny sarintany amin'ny Blackjack: Torolàlana fototra
Ny karajia Blackjack dia tetikady izay noforonin'ireo mpilalao sarimihetsika velona mba hampidina ny sisiny ary hanome tombony ho azy. Ny fomba fitsaboana dia nampiasaina tsara tao amin'ny casinos tao Las Vegas tamin'ny fandraketana an-tsoratra ary angamba maro hafa tsy voatanisa ary mifototra tanteraka amin'ny matematika izy io ary izany no mahatonga azy io.
Raha manontany tena ianao hoe inona ny karatra manisa amin'ny blackjack, dia tsotra ny valiny. Amin'ny alalan'ny fanisana ny isan'ireo karatra avo sy ambany izay efa nomanina, ireo mpandray anjara dia afaka mamaritra hoe rahoviana ny kiraro sisa tavela amin'ny sary maro sy aces, izay manome azy tombony amin'ny trano.
Ny teti-bola fototra manasongadina dia tsotra. Isaky ny misy karatra sarimihetsika na alika eo amin'ny latabatra, ny mpilalao dia mamaritra -1 ao an-dohany. Isaky ny 2, 3, 4, 5 na 6 no atao, ny mpilalao dia manisa + 1. Rehefa misy ny 7, 8, na 9 dia zaraina ny 0.
Rehefa fantatrao ny fomba isaoranao ny karatra dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba hampiharana izany. Misy tabilao fanampiny any ivelany ho an'ny mpizara karatra izay milaza aminao ny fomba hanitsiana ny lalao mifototra amin'ny laharam-pahefanao.
Ny zavatra tokony hoeritreretina dia ny ankamaroan'ny casinos dia mampiasa karazana sarintany marobe rehefa manao ny lalao. Na izany aza, raha mianatra manisa ny karatra moka ianao, dia azonao atao ny mampifanaraka amin'ny departemanta maromaro amin'ny fizarana ny laharana misy anao miaraka amin'ny isa maromaro ary manomboka amin'ny "mari-pahaizana marina" izay mbola azo ampiasaina rehefa misy ampahany maro. Misy rafitra fantsom-bola fanampiny mipoitra izay misy ny tarehimarika marim-pototra kokoa, fa ny karajia mainty fotsy antonontonony dia tokony ho ampy hamelezana ny trano, indrindra raha tsy mitandrina tsara ny mpiasa ao amin'ny casino.